uMoeen Ali uthatha abayisithupha ukunqobisa i-England
i-England ihlule amaStandard Bank Proteas ngama-runs angu-211 ezinsukwini ezine kumdlalo wokuqala we-Test ophele eLord’s eLondon ngeSonto.
Behlelelwe ukunqoba ngama-runs angu-331, amaProteas avithikile ngama-runs angu-119 uMoeen Ali ethola ama-wicket angu-6 ukumnika angu-10 emdlalweni.
Emaqinisweni, kuwona womabili amaqembu, ahlulekile ukujwayela isimo ngosuku lokugcina lapho i-England ihlulwe ngo-9/114 ngosuku kwathi i-South Africa 10/119. Futhi i-England ibizothola okuncane kunalokhu ukube uJonny Bairstow unqakiwe kwi-deep emuva kokushaya ibhola ku-Vernon Philander. uBairstow ebeno-7 ngaleso sikhathi futhi waqhubeka wenza u-51.
Bekucaca ukuthi uPhilander uzama ukuvikela isandla sakhe esilimele futhi ithuba lishabalele.
Umdlalo wanqotshwa ngosuku lokuqala ngesikhathi i-England ibeka isikhonkwana sokuhola nge-innings yokuqala kubongwa ikhulu elincomekayo eliphume kukapteni ngosuku lwakhe lokuqala engukapteni, uJoe Root, kanye nokuvimba kabi nokuphosa kwiqembu lase-South Africa.
Beku okokuqala iqembu lase-South Africa lihlulwa eLord’s kwimidlalo yezinsuku ezinhlanu eLord’s kusukela ngo-1960.
AmaProteas akhiqize i-session enhle kuwona wonke umdlalo, bathatha u-7/63 nge-session yokuqala ngosuku lwesine. Njengoba uPhilander ebebuyile ekuphoseni, amaProteas akwazile ukumpintsha izinto ndawo zombili futhi lokhu kusize bakhe incindezi elethe ama-wicket.
Kodwa i-England kade imikahle, ingaphambili ngama-runs angu-279 besalelwe ama-wicket amabili, elilodwa elika-Bairstow.
uMorkel uhlasele kuqala ngesikhathi ekhipha akade besashaya (uCook 69 off 192 balls, 10 fours noBallance 34 off 78 balls, 4 fours) kuma-overs alandelanayo futhi usekelwe uMaharaj no-Rabada ngama-wicket amahlanu alandelile phakathi kwabo.
uBairstow udedelwe uPhilander kuphosa uMaharaj ngesikhathi eku-7 waqhubeka wahlanganisa u-50 (51 off 76 balls, 6 fours) ngaphambi kokuthi kuphume umuntu wokugcina, ukubekela amaProteas u-331 ukunqoba. uMaharaj uqede eno-4/85 kwathi uMorkel no-Rabada bathatha ama-wicket amathathu umuntu emunye.
Ubunzima bomsebenzi obuhlalele amaProteas kucace ngama-overs angu-13 ngaphambi kwetiye, lapho bethole khona ama-runs angu-25 balahlekelwa ama-wicket amathathu. Ama-runs angu-10 lapho ashaywe u-Amla kwi-over eyodwa ka-Anderson.
uKuhn unqakwe kwi-leg-side kuphosa u-Anderson, u-Elgar uphindisele ibhola ku-Moeen ezama ukuhlasela ophosa nge-spin futhi ngesikhathi sekhefu, uDuminy ushaye kabi i-pull shot kuphosa u-Wood kanti uzonqakwa uMoeen kwi-square leg.
I-innings iphenduke udwendwe emuva kwekhefu njengoba i-England ikhethe ukuphosa i-spin ndawozombili. Kodwa ube nenkani uDe Kock, onyuselwe ku-No. 5 kanye no-Bavuma bahlanganise i-partnership enhle ye-innings engu-36.
uMoeen uqede enama-wicket ayisithupha okumnika ayishumi emdlalweni.
Die Standard Bank Proteas bly optimisties dat hulle steeds kan terugveg in die eerste Toets teen Engeland op Lord's. Engeland is stewig in die saal met 'n voorsprong van 216 met nege paaltjies staande na drie dae se spel. Azikho izizaba zama-no-balls - uPhilander uRoot ubungaza usuku lakhe lokuqala njengokapteni ngokuthola ikhulu ukubeka i-England ngaphambili uPhilander ubuyela kwinkundla eyamulethela ukujabula uElgar onesibindi indoda yomsebenzi – uDomingo uDu Plessis uzophuthelwa iTest yokuqala ngenxa yomndeni I-Series iqala kusasa - uElgar Ukubekezela kumsebenzelile uKuhn iCSA ibala uKuhn noPhehlukwayo kwiqembu lama-Test uMorris uhola amaProteas ekulinganiseni i-series ngokunqoba AmaProteas ahlulwe kahle kumdlalo wokuqala we-T20